SONATA-CANTATA: ရွှေစာရံ ကျောက်ဝိုင်း
ကိုဧရာ မသီတာ ဧရာသီတာ ရေချမ်း ရေစင်
၂၀၀၉-ခုနှစ်က ပင်းယမြို့ဟောင်းနားက ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ကို ရောက်ပါတယ်။ မြစ်သာဆိုတယ် ရေက ချောင်းသာသာတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ လှေကြီးတစ်စင်းက မြစ်ကမ်းပေါ် ရောက်နေပါတယ်။ မြစ်ကို လှေကူးတို့တွေနဲ့ ကူးစရာ မလိုဘဲ ပုဆိုး, လုံချည်လေးတွေမပြီး ခြေလျင် ကူးနေကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လုပ်တော့… အနားကလူတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ “ဟိုး… မှာ ပျပျလေး မြင်နေရတဲ့ တောင်ပေါ်က ရဲရွာမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ဆည်ဆောက် နေတယ်လေ” တဲ့။
မြစ်ရေ ဒီလောက် နည်းသွားမှတော့ ဒီမြစ်ကြီးကို အမှီပြုပြီး ရှာဖွေစားသောက်နေကြတဲ့ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်က လယ်ယာ, ဥယျာဉ်စိုက်သူတွေ, တံငါသည်တွေ, ကူးတို့သမားတွေ ဘယ်လိုများ စခန်းသွားကြမှာပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
နောက်ရက် ရွှေစာရံကို ဘုရားဖူး ထွက်တော့ ဒုဋ္ဌ၀တီနဲ့ တစ်ကြိမ် ပြန်ဆုံရပါတယ်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးက အိမ်ခြံဝင်းတွေမှာ လူတွေ စုဝေးနေတာ တွေ့တော့ စပ်စုမိတယ်။ မြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့...ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ခင်းကျောက် လှလှလေးတွေကို ကောက်ပြီး ရောင်းနေကြတဲ့ ကျောက်ဝိုင်းပါ။
Posted by Sonata Cantata
Labels: ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း, ဧရာ
ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်နဲ့ နောက်ခံ တောင်တန်းရဲ့ ရှုခင်းလေးက လှလိုက်တာ။ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတယ်။
ကျောက်တွေကောက်နေတယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုကျောက်မျိုးလည်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိတယ်
July 4, 2011 at 1:26 AM
ချောရေ အောက်ဆုံးပုံကို ကလစ်ခေါက်ပြီး အကျယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်...ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ တပြည်တောင်းကို ၅၀၀ကျပ်ဆိုလား ရောင်းဝယ်နေကြတာ...
ဟုတ်တယ်၊ ပထမပုံလေး အရမ်းလှတယ်၊ ကျောက်တွေ ရောင်းနေကြတာကို ရုတ်တရက်ကြည့်ပြီး ငါးရောင်းနေ တာထင်လို့..၊ ကျောက်ကောင်းတွေ ရောင်းဝယ်ရာ ငါးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့်တော့ ဖြစ်ကုန်ပြီ..။း)
July 4, 2011 at 6:15 PM
ပိဋကသုံးပုံ - ပါဠိ၊ မြန်မာပြန်နှင့် အဋ္ဌကထာ
ကမ္ဘာအေး ဗုဒ္ဓ စာကြည့်တိုက်
PTS Pali-English Dictionary
စာရေးသူသည် လောကကို ဝေဖန်သူ ဖြစ်ပြီး
စာရေးသူကို သူရေးသောစာများက ဝေဖန်သည်။
tag post (29)
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း (29)
မဇ္ဈိမဒေသ မှတ်စုများ (14)
ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီး (11)
ကျမတို့ မိန်းမတွေ (8)
BC English Course (7)
ကိုဧရာပြောသော ပုံပြင်များ (6)
ကလေးများအတွက် မြန်မာစာ (3)
မီသန့်ရေး အမှတ်တရ (2)
ဧရာ့အတွေး သီတာ့အရေး (2)
သားသား မီးမီးတို့ ပုံပြင်လေးတွေ နားထောင်ရအောင်...
အန်တီ Natasha ပြောပြနေတယ်
Links for English Language teaching and learning
A British Council website for lower primary students.
BBC Learning Resource for home and school
Theme of Sonata-Cantata
Your aspirations are your possibilities. (Samual Johnson)
The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. (Malcom Forbes)
Experience is what you get when you do not get what you want. (Anonymous)
ပုံပြင် အလား ဒဏ္ဍာရီလို
တသက်တကျွန်း ကျခံနေရသူ တစ်ယောက်
သူ့အတွက် ပြေးစရာ မြေရှိနေတာ
ကျေးဇူးပါ Blog ကမ္ဘာ
ရောက်ခဲ့ဖူးသော နေရာများ၊ မလည်ရ မနေနိုင်သော အိမ်များနဲ့ မရောက်ဖူးသေးသော နေရာများအတွက်
CBox is temporarily locked!
ဒါနပြုသည် ဆိုရာဝယ် (၁)
Copyright © http://sonata-cantata.blogspot.com/
ဤဘလော့တွင် ဖော်ပြထားသော စာ၊ ရုပ်ပုံများအား ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုပါက မူပိုင်ဖြစ်သော sonata-cantata အား c-box သို့မဟုတ် e-mail - sonata.cantata@gmail.com မှတဆင့် အသိပေး အကြောင်းကြားပြီးမှသာ ကူးယူဖော်ပြစေလိုပါသည်။ http://sonata-cantat.blogspot.com/ မူရင်း link ကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။